Brand24: Mampiasa ny fihainoana ara-tsosialy hiarovana sy hampitomboana ny orinasanao | Martech Zone
Vao tsy ela akory izay izahay dia niresaka tamina mpanjifa iray momba ny fampiasana media sosialy ary somary gaga aho noho ny faharatsiany. Tsapan'izy ireo tamim-pahatsorana fa toy ny fandaniam-potoana, fa tsy nahatratra ny valin'ny asa aman-draharaha niaraka tamin'ny mpanjifany mihantona amin'ny Facebook sy tranonkala hafa izy ireo. Mampientam-po fa io dia mbola fatra-pino ny orinasa aorian'ny folo taona nianarana ny fomba hampiasana ny paikady sy ny fitaovana hanampiana. Ny marika 24% ihany no milaza fa manao izany fihainoana ara-tsosialy
Inona no atao hoe fihainoana ara-tsosialy?
Ny fihainoana ara-tsosialy dia dingan'ny fampiasana fitaovana fanaraha-maso amin'ny fotoana tena izy hihainoana ny firesahana ny marikao, ny vokatrao, ny olona na ny indostria an-tserasera, ary koa ny fandrefesana ireo voalaza rehefa mandeha ny fotoana. Ilaina ny fitaovana manokana satria ny motera fikarohana dia tsy mitatitra an'io fampahalalana io amin'ny fotoana tena izy - matetika tsy mahita ny ankamaroan'ny resaka amin'ny tranonkala media sosialy.
Raha tokony hivezivezy amin'ny alàlan'ny fanolorana antontan'isa mahatezitra dia nasehonay azy ireo fotsiny ny fomba fiasa. Izahay dia efa nanao fitsapana Brand24 mandritra ny iray volana mahery kely izao ary tiako ny fanamorana hananganana sy hanaraha-maso ireo marika, olona, ​​vokatra ary indostrianay manokana amin'ny alàlan'ny lampihazo - avy eo mailo ianao rehefa misy ny fotoana mety. Brand24 dia manana interface madio dia madio, mora vidy ary manana fanairana mailaka feno.
Fampiasana ny fihainoana ara-tsosialy hiarovana sy hitombo ny asanao
Nasehonay ny mpanjifanay ny fomba hampiasana haino aman-jery sosialy hahasoa ny orinasa, handalo senary an-taonina:
Service - Nandefa fangatahana vitsivitsy izahay ary namantatra ny toerana nanondroana ny marika misy azy ireo amin'ny Internet, saingy tsy nisy olona avy amin'ny orinasan'izy ireo namaly. Fotoana very io nialoha ny toe-javatra ratsy ary nanampy ny iray amin'ireo mpanjifany hivoaka… saingy tsy azon'izy ireo izany. Tsy tsapan'ilay orinasa fa nisy ny resaka nifanaovana tamin'ny toerana tsy nanamarihana azy ireo mivantana tamin'ny resaka.
Sales - Nandefa fangatahana vitsivitsy momba ny serivisin'izy ireo izahay ary nanoro azy ireo ny toerana mety ananan'ny mpanjifa sasany manontany amin'ny Internet momba ny serivisy natolotr'izy ireo… fa ny valiny dia ny tambajotram-panantenan'ny rehetra manandrana manome toro-hevitra. Alao an-tsaina ange raha toa ka nivadika ny iray tamin'ireo ekipa mpivarotra azy ireo ary nanome valiny matihanina. Mpanjifa vaovao? Ny 54% amin'ireo mpivarotra B2B dia nilaza fa namorona fitarihana avy amin'ny media sosialy
Promotion - ny orinasa dia nanatrika hetsika indostrialy sasany izay nampiroboroboany ny tolotra ataon'izy ireo. Nasehonay azy ireo ny toerana misy olon-kafa ao amin'ny indostrian'izy ireo manangana fivoriana voalahatra amin'ireo mpanjifa ho avy mialoha ny hetsika amin'ny alàlan'ny media sosialy. 93% ny fanapahan-kevitry ny mpividy dia voataona amin'ny media sosialy
Marketing - nanao marketing nentim-paharazana ny orinasa fa tsy nanosika ny olona hiditra amin'ny tranokalan'izy ireo mihitsy raha te hahalala bebe kokoa. Ao amin'ny tranokalan'izy ireo dia nanana ebook sy loharano hafa izy ireo, saingy tsy nampiroborobo azy ireo velively tamin'ny Internet. Nasehonay azy ireo ny fomba nampiroboroboan'ny mpifaninana azy ireo votoaty sy fitarihana fitarihana mankany amin'ny pejy fiantsonana.
fihazonana - Nasehonay ny orinasa fa misy orinasa hafa manampy ny mpanjifany an-tserasera imasom-bahoaka, manome fanohanana lehibe amin'ny alàlan'ny fantsona rehetra… araka ny itiavan'ny mpanjifa azy. Tsy fomba iray lehibe hitazonana ny mpanjifanao ihany, fa mamela ny mpanjifa ho avy hafa hahita ny serivisy lehibe. 39% amin'ny orinasa ihany no manao tatitra momba ny fampiasana angon-drakitry ny mpanjifa sy ny fomba fitondran-tena hananganana paikady marketing
fijery - Nanontany izahay hoe ahoana no fomba ahazoan'izy ireo valiny momba ny vokatra sy serivisin'izy ireo ary nilaza izy ireo fa nanao fanadihadiana imbetsaka sy antso an-tariby niaraka tamin'ny mpanjifa. Nasehonay azy ireo ny fomba ahafahan'izy ireo manao fanadihadiana isan-karazany amin'ny media sosialy hahazoana valiny mitohy amin'ireo mpanjifa mavitrika nefa tsy mandany vola be. 76% amin'ireo mpivarotra no milaza fa mila mifantoka bebe kokoa amin'ny angon-drakitra mba hahomby
hery miasa mangina - ny orinasa dia manana mpivarotra sy mpiara-miasa amin'ny indostria izay nalaza be, saingy tsy tsapan'izy ireo ny manaraka sy ny fitaomana ny sasany tamin'ireo olona sy orinasa ireo tamin'ny Internet. Nasehonay azy ireo ny fomba hahitan'izy ireo sy angatahin'izy ireo ny fanampian'ny influencer hahatratra ny mpihaino vaovao mifandraika fa tsy mandany vola amin'ny dokam-barotra.
laza - nasehonay azy ireo ny fomba ahafahan'izy ireo manara-maso sy mamaly ny tsikera ratsy ateraky ny vahoaka imasom-bahoaka. Tsy vitan'ny hoe afaka mamaly ihany izy ireo fa afaka manome valiny izay ahafahan'ny mpanjifa mpanjifa hafa mahatakatra ny fahaizany mikarakara ireo toe-javatra ireo.
hevitra - nomenay azy ireo tranokala famerenana niche marobe amin'ny indostrian'izy ireo, ny sasany izay tsy fantany akory. Hitanay izy ireo tamin'ny fanaovana fikarohana vitsivitsy momba ny toerana nanonona ny mpifaninana aminy. 90% ny mpanjifa matoky ny tolo-kevitry ny namana mihoatra ny 14% izay matoky ny doka
Content - Rehefa nasehonay ny fifandraisan'ireo mpifaninana aminy dia afaka namantatra resaka nifanaovana antsipirihany izay nahasarika ny sainay izahay - fotoana mety indrindra hanoratana ebook na hamoahana infographic.
Organic Search - Nasehonay azy ireo fa ny fizarana infografika dia nanjary firesahana, izay nitarika ny fizarana tranonkala hafa, namokatra rohy tena misy ifandraisany sy manana fahefana be izay mitondra ny laharan'ny fikarohana organik.
Recruitment - nasehonay azy ireo ny fomba ahafahan'izy ireo manomboka mikendry sy manintona talenta amin'ny orinasan'izy ireo amin'ny alàlan'ny media sosialy.
Trends - Nasehonay azy ireo ny fitomboan'ny lohahevitra amin'ny indostrian'izy ireo na hihena rehefa mandeha ny fotoana, ahafahan'izy ireo mandray fanapahan-kevitra tsara momba ny tsena sy ny marketing momba ny vokatra sy serivisin'izy ireo.
fifaneraserana - nasehonay ny tsy fahitana firy ny isan'ny olona manaraka marika, pejy na olona amin'ny media sosialy - ny fomba nahafahan'izy ireo nifandray tamin'ny tambajotram-baovao.
Manomboha fitsapana Brand24 maimaim-poana
Raha mandeha ny orinasanao hiahotrahoranareo, Brand24 dia manana fampidirana lehibe. Mbola tsara kokoa aza, nahazo tena tsara ry zareo finday fampiharana ihany koa.
Statistik fihainoana ara-tsosialy avy amin'ny B2C
Tags: brand24fahitana ny mpanjifafitazonana ny mpanjifaSerivisy ho an'ny mpanjifafironana ho an'ny mpanjifamahita ny influencersfironana indostrialyproduct reviewslazafitantanana lazahevitraSearch Marketingfihainoana ara-tsosialyfampiroboroboana ny media sosialyfanaraha-maso ara-tsosialyvarotra sosialyfivarotana ara-tsosialymanara-maso ny valin'ny vokatra
Jan 2, 2017 ao amin'ny 7: 15 AM
lahatsoratra mahafinaritra! Misaotra anao manonona sy manoro an'i Brand24 ♥